China Solar Photovoltaic System Circuit Breaker သည် အခမဲ့နမူနာကို ပေးပါသည်။
Solar Photovoltaic System Circuit Breaker မိတ်ဆက်-
၎င်းသည် ဝန်ပိုပြတ်တောက်မှုကဲ့သို့ အကာအကွယ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် နေအိမ်များတွင် အလင်းရောင်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တွင် အသုံးပြုကာ အပိုင်းပိုင်းလျှပ်စစ်မော်တာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့တွင် မြင့်မားသောအကာအကွယ်အဆင့် (IP20 အထိ)၊ မြင့်မားသော ဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထိလွယ်ရှလွယ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ အဆင်ပြေသော၊ multi pole တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း ect. ၎င်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် AC 50Hz၊ 250V ၏ ဆားကစ်တစ်ခုတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နှစ်ထပ်၊ သုံး၊ လေးတိုင်တွင် 415V။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းတို့အား ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် လျှပ်စစ်ယန္တရားနှင့် မီးချောင်းပတ်လမ်းကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
Solar Photovoltaic System Circuit Breaker ၏ ကန့်သတ်ချက်များ
စံ EN60898(IEC60898) IEC60947-2
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ 1-63A
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Breaking စွမ်းရည် 6.0kA IEC60898(0.5~63A)
မက်။ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ fuse ပါ။ 100AgL(>10kA)
အလုပ်လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -5° ~+40°
လျှပ်စစ်ဘဝ အကြိမ် 8000 ထက်မနည်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ အကြိမ် 20000 ထက်မနည်း
အပေါ်ယံအဆင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် လက်ရှိ Imm(A) ဝင်ရိုးစွန်း အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား(V) အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း လက်ရှိ In(A) အကန့်အသတ်ဖြင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်နိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ OEM
လက်ရှိ Icu(A) ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း အချိန် (ms)
63A 1 DC ~250V 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 15. 16. 20. 25. 32. 40. 50. 63 6000 10 ဟုတ်သည်။
2 DC ~500V 6000
3 DC ~ 750V
4 DC ~1000V
hot Tags:: နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Photovoltaic စနစ် Circuit Breaker၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်